လက်ကားကွင်းဆက်ကွင်းဆက်ကွင်းဆက် link စိန်ခြံစည်းရိုးကာရံထားသောဘောလုံးကွင်းခြံစည်းရိုးဘောလုံးကွင်းခြံစည်းရိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းချသူ | RICON
·စိုက်ပျိုးရေး (သို့) လူနေရပ်ကွက်များအတွက်ခြံစည်းရိုးများဆောက်လုပ်ခြင်း
·အများသုံးဧရိယာများ၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ လေဆိပ်များ၊ အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန်နေရာများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများစသည်တို့အတွက်ခြံစည်းရိုးများဆောက်လုပ်ခြင်း
1. သွပ်ရည်စိမ်ကွင်းဆက် link ခြံစည်းရိုး၊ သွပ် ၅၀-၁၁၀ gr/m2
၃။ သံမဏိသံမဏိကြိုးကွင်းဆက် link ကာရံခြင်း
4. PVC coated chain link ခြံစည်းရိုး
မူရင်းဒေသ: Hebei, China
Loadng ဆိပ်ကမ်း၊ xingang၊ တရုတ်
ဝါယာကြိုးအထူ: ၁.၅၀ မီလီမီတာမှ ၅.၀၀ မီလီမီတာ
အဖွင့် ၁ " ၁.၅ " ၂ " ၂-၁/၄ " ၂-၃/၈ " ၂-၁/၂ " ၂-၅/၈ " ၃ " ၄ "
၂၅ မီလီမီတာ ၄၀ မီလီမီတာ ၅၀ မီလီမီတာ ၅၇ မီလီမီတာ ၆၀ မီလီမီတာ ၆၄ မီလီမီတာ ၆၇ မီလီမီတာ ၇၅ မီလီမီတာ ၁၀၀ မီလီမီတာ
ဝါယာကြိုးအချင်း ၁၈# -၁၃# ၁၆# - ၈# ၁၈#-၇#
၁.၂ - ၂.၄ မီလီမီတာ ၁.၆ မီလီမီတာ - ၄.၂ မီလီမီတာ 2.0mm-5.00mm
လိပ်၏အရှည် ၀.၅၀ မီတာ - ၁၀၀ မီတာ (သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသော)
လိပ်၏အကျယ် 0.5m - 5.0m
သော့ချက်စကားလုံးများ: သွပ်ရည်စိမ်ကွင်းဆက် link ခြံစည်းရိုး၊ သွပ်ရည်စိမ်ကွင်းဆက် link ဝါယာကြိုး၊ PVC coated chain link ခြံစည်းရိုး၊ PVC coated chain link mesh, PVC coated ဘောလုံးကွင်းစည်းရိုး၊ PVC coated chain link ခြံစည်းရိုး၊
Ricon ဝါယာကြိုး mesh co ။ , Ltd ကို USD100, 0000 နှင့်မှတ်ပုံတင်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ဝါယာကြိုး mesh products များအဖြစ်ကျော်ကြားသော Anping ခရိုင်၊ Hebei၊ China တွင်တည်ရှိသည်။ ထုတ်လုပ်ခြင်းအနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များတွင်သွပ်ရည်စိမ်ဝါယာကြိုး၊ အနက်ရောင်ဆေးထားသောဝါယာကြိုး၊ သံမဏိဝါယာကြိုး၊ မွေးမြူရေးဝါယာများ၊ ဂဟေဆော်ထားသောဝါယာကြိုးကွက်၊ ဆဋ္ဌဂံဝါယာကြိုးကွက်၊ ကွင်းဆက်လင့်ကွက်၊ ဖိုက်ဘာမှန်ကွက်၊ ခြင်ထောင်၊ သံမဏိဝါယာကြိုးကွက်၊ တိုးချဲ့ကွက်များနှင့်အမျိုးအစားများစွာပါဝင်သည်။ ခြံစည်းရိုးထုတ်ကုန်များ၏ဤထုတ်ကုန်များကိုရေနံ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဆေးဝါး၊ ပလပ်စတစ်၊ ရာဘာ၊ အစားအစာ၊ မိလ္လာသန့်စင်ရေးနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။
အရည်အသွေးနှင့်ထိရောက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထာဝရလိုက်စားမှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုကမ္ဘာတွင်ရှင်သန်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်သည်ဖောက်သည်များအားအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း၊ အရည်အသွေးကောင်းသောထုတ်ကုန်များ၊ လျင်မြန်သောပေးပို့မှု၊ မြန်ဆန်ပြီးထိရောက်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခု: ကနေဒါယာယီခြံစည်းရိုး၊ ကနေဒါအတွက်ယာယီခြံစည်းရိုးဖြုတ်တပ်နိုင်သောခြံစည်းရိုး
Mesh Panel များ